Ụbọchị My Pet » Anọ ụdị Men Women Go N'ihi
Anọ ụdị Men Women Go N'ihi
Isi ihe na-obi madu bụghị site ya afo. Ọ bụ site na ya n'uche. The ojiji nke akparamàgwà na chọpụtara nwere ike na-emeri unu onye nke gị na nrọ na-eduga a mkpụmkpụ-okwu romance ma ọ bụ na ndụ obi ụtọ. Ihe ọ bụla ị na-achọ n'ebe a na ndụ gị. Ịmata ha mmadụ na ihe mere ha tinye akà rà bụ isi na pụrụ iduga gị n'ime ebe a na ike na obi ha. Below is four types of men’s’ mmadụ na otú i nwere ike ime ka onye ahụ gị.
The Jụụ Dude
The jụụ Ihọd bụ ụdị Ihọd onye nēche nwere ọtụtụ ndị ná ndụ ya. Ọ nwere ike na ụdị dị ka a na onye nwere entourage. Ya mere, na ya pụta, ị pụrụ ịdị ala na-atụ iji na ụwa ya. Anya ndị a dị mkpa jụụ Ihọd. Whether it is the latest trends he wears or he takes an anti-fashion stance the cool guy walks with confidence at all times and can border on the over-confident at times. A cool guy likes to be the center of attention and won’t like you to upstage him so let him have the attention. Jụụ ụmụ okorobịa dị ka ndị ọzọ mma ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọ na gburugburu ha na oyi ndị mmadụ otú ọ bụrụ na ị nwere nerdy e ji mara na-agbalị bụghị na-egosipụta na ha na ya nọ ruo mgbe ọ bụ otú na ịhụnanya na gị na ọ nnọọ ike imeli enweghị gị na ndụ ya na maa na-anaghị egosipụta ha n'ihu ndị enyi ya! Jụụ lads agbasaghị ntị ọzọ ndị enyi ha karịa ọtụtụ n'ihi na ha na ndị ọzọ’ echiche dị ka gospel n'elu ha onwe ha ikpe ka ha wee ghara ida ihu.
The elu brow Ihọd bụ ụdị Ihọd onye mgbe niile anya dapper na eleghị anya na a uwe. Ọ nēche okwu banyere aguliteghi ihe music, akwụkwọ, wdg … ma ọ dịghị mgbe veers n'ime Ekwughị ihe eccentric ọcha nke aguliteghi ihe ndị a na ubi. Nke a bụ n'ihi na ha bụ kwesịrị nnọọ ekwesị ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ ahụ bụ ihe ha na-amasị-egosi: nwere ọgụgụ isi na ihe kwesịrị ekwesị. Dị ka mma Dude
appearances are vital to the high-brow bloke. E nēche na-a snobbish mmewere kwa ụdị nke mmadụ. Adị TV na dị ka ndị a n'efu nke oge ya. Iji nweta na nwoke dị ka nke a ị ga-mkpa ahịhịa elu na gị na aguliteghi ihe ọmụma na-eji ejiji dị nnọọ ọkaibe ma mara. Ma gbalịa ka ị ghara ịghọ snobbish na usoro. Cheta na ị nwere ike na-akpa a snob enweghị kemgbe a snob onwe gị. Ọzọ mmewere tụlee na elu brow bloke na-eri si. Ọ gaghị na-ejide ndị nwụrụ anwụ na a Cafe na ọnụ ala nri ma ọ bụ MacDonalds. Ọ ga-eleghị anya ndị ọzọ a Erimeri ihe ma ọ bụ tapas mmanya ị ga-ejedebe na ya.
The Nwa-esote-n'Ọnụ Ụzọ
The nwa-ọzọ-ụzọ bụ gị dị ọcha-ịkpụ, ụtọ Ihọd. O nwere mmasị na-aṅụ ma ọ bụghị overdo ya na ọ nēche amasị nnọọ mainstream music, TV, wdg … The kwesịghị banyere nwa okoro-ọzọ-ụzọ bụ na ọ bụ ihe uto na ìhè nke bụ ma eleghị anya na-abụghị eziokwu. Ha nwere ike iju gị anya. E nwere ma eleghị a mischievous n'akụkụ e nke ha na-egosi gị na nzuzo. Olileanya na ime n'ihi unu! Ka ha onwe ha na-adịghị na-agbalị ịgbanwe ndị ha bụ ma ọ bụrụ na ị na-eche na ha na-ezo n'azụ ha mma oyiyi na ghara ikwe ha ezigbo onwe si na ngalaba dị ka mgbe ụfọdụ bụrụ na a otutu nke ụmụ nwoke-ọzọ-ụzọ mgbe ahụ jiri nwayọọ-agba ha ume ime otú ahụ site na-egosi ha na-amasị gị na ezigbo ha na na uche kwa. Ma, ọ bụghị inupụ siri oke ike n'ihi na ọ chọrọ ka a mere na ha onwe ha ijeụkwụ dị ka ọ bụ ike ka onwe onye si n'ebe.
The nerd yiri akwa brow bloke n'echiche nke maara a otutu aguliteghi ihe. Otú ọ dị, the nerd tends to like what they like as opposed to liking things for show or to show how intelligent they are. Ma mgbe ndị aguliteghi ihe na-adịghị niile posh na ihe kwesịrị ekwesị. The nerd bụ nnọọ ezi na anya na-bụghị ihe nile na mkpa. There are many different forms of nerds from rockers to hippies to Whovians (Dọkịta Ònye Fans) na sci-Fi Fans. Ha na-akpali nnọọ mmasị ndị mmadụ ma na-emekarị gafere n'ihi na ndị mmadụ na-eche nerds na-achọsi maka romance nke bụ a nkịtị kwesịghị. Nerds are as picky as anyone else and love to find a good conversation with a partner. E nēche na-a ọgwụgwụ ka nerd n'ihi na mgbe mgbe nerds e tinyere ala na n'oge gara aga. Anyone perceived differently does have a lot to put up with so finding a point of trust can be difficult. Emekarị, nerds tend to date other nerds because they are comfortable been themselves with them but if you can prove you are open-minded this could lead to an interesting, fun, nwayọọ, and beautiful relationship.